Qodobbada Salaadda ee ka dhanka ah Qaabka xun ee Qoyska | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Qodobbada Salaadda ee ka dhanka ah Qaabka xun ee Qoyska
Qodobbada Salaadda ee ka dhanka ah Qaabka xun ee Qoyska
Maanta waxaan la macaamili doonnaa dhibcaha salaadda ee ka dhanka ah qaabka xun ee qoyska. Sayidku wuxuu rabaa inuu dadka ka badbaadiyo baratakool jiil iyo xumaan awoowgood oo noloshooda ku koobay qaab jinniyeed gaar ah. Qoysaska qaar ma haystaan ​​arday ka qalin jabiyay jaamacad, qofkasta oo isku dayana inuu ku jabiyo harqoodkaas isagoo aadaya iskuulka, shaqsiyaadka noocaas ah ayaa si sharaf-darro ah looga xayuubin doonaa iskuulka.
Reeraha kale, dadku ma gaaraan da 'cayiman. Waxay dhintaan markay ku dhow yihiin inay saacada da'daas. Qoysaska qaarkood, madhalaysnimadu waa hawl maalmeedkeeda. Aynu ka soo qaadanno tixraac Qorniinka. Ibraahim wuxuu ahaa madhalays sannado ka hor intuusan Isxaaq dhalan.
Sidoo kale, Isxaaq wuxuu ahaa madhalays ka hor intuusan Yacquub dhalan. Wakhtigii Yacquub, afadiisa uu jeclaa, Raaxeel, waxay ahayd madhalays sanado kahor intaan uurkeeda la furin. Isbarbardhigan ayaa tusaale cad u ah qaabka xun ee qoyska. Ma aqaano qaab dhismeedka qoyskaaga, laakiin Ilaah wuxuu qarka u saaran yahay inuu baabi'iyo qaab kasta oo shar ah oo xaddidaya horumarkaaga nolosha. Waxaan amar ku bixinayaa magaca Ciise. Qaab kasta oo shar ah waxaa lagu burburiyaa magaca Ciise.
Tilmaan-bixiyahan ducadu wuxuu diiradda saari doonaa in badan oo ka mid ah Ilaah burburinta naclada jiilka. Waxaa jira qoysas aad u tiro badan oo ka soo jeeda Afrika oo leh habaar ama mid kale. Mar alla markii aad ka mid noqotid qoyskaas, waxaa ku dhibaysa habaarkaas, waxayna ku noqon doontaa cunsur xaddidan illaa aad ka jebiso. Goliath wuxuu ahaa cunsur xaddidan horyaalnimada David. Ilaa Goli'ad laga adkaaday, Daa'uud wuxuu ahaa adhijir kale oo da 'yar. Ilaa Boqor Saa'uul la qaatay, David wuxuu ahaan lahaa oo keliya dagaalyahan kale oo weyn oo loo malaynayay inuu Boqor yahay. Ilaah wuu baabi'inayaa qayb kasta oo xaddidan, wakiil kasta oo gudcurka ah; nacalad kasta oo jiil ah ayaa lagu baabiin doonaa magaca Ciise.
Rabbi Ciise, waxaan kuugu mahadnaqayaa nimcada inaad nooshahay. Magacaaga ha la weyneeyo.
Waxaan ka soo horjeedaa qaab kasta oo xun oo qoys oo ku dhaca nolosha, qaab kasta oo shar ah oo dadka iga horreeyay ka dhigay kuwo aan waxtar lahayn. Waxaan amar ku bixinayaa in tusaalahaas oo kale uu igu dul dhaco magaca Ciise. Qaab kasta oo jinni jinni ah oo dhimasho ah marka laga hadlayo horumarka, waa lagu jebiyaa magaca Ciise.
Waxaan ka soo horjeedaa qaab kasta oo xun oo guur guur. Jinka ka hor istaagay dadka qoyskayga ka mid ah dejinta guurka, waxaan amar ku bixinayaa inaad lumin doonto awoodaada aniga magaca Ciise.
Awoodda fashilka ee waalidkayga wax ka qabatay, waxaan kuugu imid dhiigga wanka. Maxaa yeelay, waxaa lagu qoray subkidda harqood kasta waa la jebin doonaa. Harqood kasta oo ka mid ah burburka qoyska, ayaa laygu jebiyey aniga magaca Ciise. Maxaa yeelay, waxaan Sayidka Ilaah dhigay midigtayda, oo laygama dhaqaajin doono, maamuus kasta oo xagga aabbahayga ah oo ka soo jeeda qoyskayga ayaa hortayda lagu jebiyey magaca Ciise.
Waxaan ka hor imanayaa xayawaan kasta oo shar ah oo loo xilsaaray la socoshada horumarka reerkayga, ha loo baabiiyo xoolaha noocaas ah magaca Ciise. Qaab kasta oo sixir ah oo qoyskayga ka mid ah, hadda ku qabso magaca Ciise.
Beer kasta oo jinni ah oo diiday inay dhinto, waxaan kuugu imid adiga magaca ka sarreeya magacyada kale, ku dhin magaca Ciise.
Wakiilka dhimashada ee ka dhex shaqeeya qoyskeyga, waxaan kugu imid adiga oo dab jooga magaca Ciise.
Rabbiyow kac oo yeel dhar kasta oo jiilaal ah ama khamiis kasta oo loo isticmaalo aqoonsiga cadawga dhibaya qoyskayga, khamiisyo ama dhar noocan oo kale ah noloshayda u shid maanta.
Maanta laga bilaabo, waxaan isku subkay dhiigga qaaliga ah ee Ciise, subkiddayda oo dhinac iiga dhigi doonta heer sare, subkiddayda oo dhinac iiga dhigi doonta haybad, ha iigu soo degto magaca Ciise.
Ruux kasta oo shaydaan ah oo ku jira guriga aabbahay, nin kasta oo xoog ku leh guriga hooyaday oo xaddidaya Guusha dadka, dabka ayuu ku qabtaa hadda magaca Ciise.
Rabbiyow, kac, oo cadaawayaashaadu ha kala firdheen, Nin kasta iyo naag kasta oo shaydaanku u xil saaray inay la socdaan koritaanka qoyskeyga waxay ku dhintaan magaca Ciise hadda.
Waxaan u kala jajabiyaa silsilad kasta oo shar ah oo cadawgu u adeegsaday qabashada xubnaha qoyskeyga oo aan qofna reerka ka awood badin midka kale. Waxaan silsilad noocaas ah dab ku shiday magaca Ciise.
Sayidow, waxaan amar ku bixinayaa in laga bilaabo maanta, aan noqdo qof aan la joojin karin awood kasta oo mugdi ah oo ku dhex jirta qoyskayga magaca Ciise.
Dhamaantiin wakiilka saboolnimada ee qoyskeyga, oo qorsheynaya inaad i weeraraan ayaa ku dhacaya kuna dhinta magaca Ciise.
Waayo, waxaan xambaaraa sumaddii Masiixa, ninna yaanu i dhibsan. Waxaan diiday inaan ku dhibto qaab kasta oo xun oo qoyska magac Ciise ah.
Aabbow Sayidow, waxaan rabaa inaad igu subagto saliidda weyn, in xoog ama maamulo awoodin inay igu qabtaan magaca Ciise.
Rabbiyow Ilaahow, nimcada heer sare maanta ha igu soo gaadho magaca Ciise. Nimcada aniga dhinac weyn iga dhigi doonta maanta ha igu soo gaadho gacmahaaga xoogga badan.
Qaab kasta oo shar ah oo ka mid ah itaal darrida qoyska, waxaan iska dhaafayaa magaca Ciise. Maxaa yeelay Qorniinku wuxuu leeyahay Masiixu wuxuu qaaday cudurradayda oo dhan, isaguna wuu bogsiiyey cudurradayda oo dhan. Waxaan kansal gareeyaa nooc kasta oo jirrooyin ah noloshayda magaca Ciise.
Waxaan ku helayaa awood jabinaysa nooc kasta oo habaarka jiilka ah ee magaca Ciise. Maxaa yeelay Qorniinku wuxuu leeyahay Masiixu inkaar baa inagu noqday, waxaan ku baabi'inayaa nooc kasta oo habaar ah noloshayda magaca Ciise.
Waxaan ka soo horjeedaa hab maamuus kasta oo abtirsiinyadayda ku abtirsada oo dadka hoos u dhigay. Waxaan ku baabi'inayaa dabka Ruuxa Quduuska ah. Qaab kasta oo shar ah oo dadka ka careysiiya barta guusha, wakiil kasta oo carqaladeeya oo u oggolaanaya barakooyinka dadka ayaa iska sii dhacaya, waxaan kugu baabi'inayaa dabka Ruuxa Quduuska ah.
Qorniinku wuxuu sheegayaa siduu Ilaah ugu subkay Ciise Masiix Ruuxa Quduuska ah iyo xoogga, wuuna ku socday inuu wanaag sameeyo. Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad igu subagto Ruuxa Quduuska ah iyo xoogga oo uusan wakiil gudcurka ahi ii diidi karin. Waxaan rabaa inaad ii subagto in habaar abtirsiin ama qaab xun oo reernimo igu yeelan doonaan aniga magaca Ciise.
hab maamuuska awooweyaasha
Qaabka xun ee qoyska
article PreviousQodobbada Salaadda ee ka dhanka ah riyada xun
Next articleQodobbada Salaadda ee Weerarka Xun
EMMANUEL Akpan Andrew Nofeembar 21, 2020 saacadu markay tahay 1:40
Nin ilaah fadlan waxaan ahay nin da 'ah 54 waxaanan la ildaranaa dhibaatada nolosha guurka iyo dhibaatooyinka dhaqaale.Waxaan rabaa inaad iga caawiso inaad ii ducayso horumar aan ka gaadho arimahan. Hoos waa magacayga iyo Gmail fadlan.
30 Salaadood oo Guul laga gaadho Imtixaanada WAEC / WASSCE iyo NECO
PSALM 39 Micnaha Aayadda ay aayadda aayadda
Awoodda Salaadda ee Nolol Maalmeedkeenna.
80 Salaada Casharbixinta oo Ka Soo Baxday Xiriirka Qoyska